Posted by shiikha on 16/09/2017 23:39:16
Cayaartii furitaanka tartankan oo ah kan labaad ee ugu shacbiyada badan dalka Soomaaliya ayaa waxaa daawashadeeda kasoo qeyb galay masuuliyiin darajo sare leh oo ay ka mid yihiin Taliyaha xooga dalka Soomaaliya General Axmed Maxamed Jimcaale, guddoomiyaha Gobalka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed, guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdiqani Saciid Carab iyo masuuliyiin kale.
“Duqa magaaladu waa nin dhalinyaro ah oo jecel kubada cagta mar kastana diyaar u ah in uu gacan nagu siiyo horumarinta kubada cagta”sidaasi waxaa munaasabada furitaanka ka sheegay guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdiqani Saciid Carab.
“Waxaan sidoo kale jeclahay in aan halkan uga mahad celiyo taliyaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliya General Axmed Maxamed Jimcaale taageerada buuxda ee uu siiyay tartankan.
“Tartanka General Daa’uud waxaa sadexdii sano ee lasoo dhaafay kharashka ku baxa oo dhan bixinayay taliska sare ee xooga dalka, waxaana Taliye Jimcaale uu noo balan qaaday in maalgelinta tartankan ay sii wadi doonaan”ayuu yiri guddoomiye cabdiqani Saciid Carab, ka hor intii aanu cod baahiyaha kusoo dhaweyn taliyaha xooga dalka.
“Waxaa uu ahaa aabaha xooga dalka, waxaa uu ahaa aas aasihii ciidanka xooga oo aad ogtihiin awooda ay ku lahaayeen qaarada Afrika. Wuxuu ahaa udub dhexaadka qaranimada Soomaaliya iyo jiritaanka Xooga dalka Soomaaliyeed”ayuu yiri taliyaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
“Sharaf weyn ayay ii tahay in laygu casuumo in aan furo tartanka General Daa’uud 2017”ayuu yiri guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ka hor intii aanu usoo daadagin gudaha garoonka isagoo kaddibna laaday kubadii ugu horeysay ee tartankan.